I call you now challenge ! (article) by DARAGRA PHONEKYAW on AuthorsDen
Featured Authors: Jeff Mason, ialex canton-dutari, iDanae Wilkin, iGeorge Wallach, isandrea mosses, iTonya Kinzer, iRoger Vizi, i
Articles, Poetry DARAGRA PHONEKYAW
DARAGRA PHONEKYAW, click here to update your pages on AuthorsDen. I call you now challenge !
by DARAGRA PHONEKYAW Rated "R" by the Author.
Follow Share Recent articles byDARAGRA PHONEKYAW
� TO HAVE A PEACE FOR THE WORLD� No one can serve two masters(Dog & God)� SECOND COMING OF JESUS CHRIST� ဘ၀အသက်တာ� You all must produce fruit in keeping with repentance� True Light comes with New Age (စစ်မှန်သော� Time is coming and has now come when the dead will hear the voice of the Son of God and those who he
May Peace and Grace from God, upon to you all!
Dear Brothers & Sisters in this World.
ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော်နှင့်ငြိမ်သက်ခြင်းသည် သင်တို့အပေါင်း၌ ရှိပါစေသော။
Today you are good man for your family, working place, communities and your country and your long life. You are graduated and educated person for all things. You know all things in sciences and Arts. You can do all things. You have all things.
If so, what is your destination for your end of Life? Nirvana or Janna or Heaven or others?
ယနေ့ သင်ဟာ သင့်မိသားစု၊ သင့်အလုပ်၊သင့်ပတ်ဝန်းကျင်လူမှုနယ်ပယ်၊သင့်နိုင်ငံနှင့် သင့်ဘ၀တစ်လျှောက်လုံးအတွက် ကောင်းမြတ်တဲ့သူဖြစ်တယ်။လူမှုနယ်ပယ်အားလုံးမှာ သင်ဟာ ပညာတက်၊ဘွဲ့ရပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်တယ်။ သင်ဟာ ၀ိဇ္ဖာ၊သိပ္ပံအတက်ပညာတွေကို သိကျွမ်း တက်မြောက်ထားသူဖြစ်တယ်။ ခပ်သိမ်းသောအမှုအရာတို့ကို ပြုလုပ်တက်စွမ်းနိုင်သောသူဖြစ်တယ်။ ထိုအတိုင်းအမှန်ဖြစ်တယ်ဆိုလျှင် သင်၏ ဘ၀အဆုံးပန်းတိုင်က ဘာဖြစ်မလဲ။ နိဗ္ဗာန်လား။ သုခဘုံလား။ ကောင်းကင်ဘုံလား။အခြားသောဖြစ်တည်ခြင်းလား။
But , before you leave from this life-being out, you must know about Eternal Living God (Creator) by Jesus Christ and you needed to know Jesus Christ and who he is and what for he existing above all , why he is King of the Kings and Lord or the Lords for all people.
သို့သော်လည်း ၊ သင်အနေနှင့် ဒီလူလောကအတွင်းက လူသားဘ၀နှင့် အဆုံးသတ်မသွားသေးခင်မှာတော့ သင်ကို ဖန်ဆင်းထားတဲ့ ထာဝရအရှင်ဘုရားသခင်ကို ယေရှုခရစ်အားဖြင့်သိသွားရမယ်။ သင်ဟာ လူသားအဖြစ်လောကမှာ အသက်ရှင် ဖြစ်တည်ရှိနေတဲ့အတွက် ယေရှုခရစ်ကို သိဖိုအလွန်လိုအပ်ပါတယ်။ ယေရှုခရစ်ဟာ ဘယ်သူလဲ၊ ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲ၊ ဘာအတွက် ခပ်သိမ်းသော အရာတွေရဲ့အထက်မှာ ရှိနေတဲ့သူဖြစ်တာလဲ။ လူသားအားလုံးအတွက် ယေရှုခရစ်ဟာ ဘုရင်တကာတို့ရဲ့ဘုရင်၊ အ၇ှင်တကာတို့ရဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာ သူက ဘာမို့လို့လဲ၊ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတာ သင်လူသားတစ်ယောက်အနေနျင့် သိသွားရမည့်အရာတွေဖြစ်တယ်။ သိကိုသိရမယ်။
Even you have known all Dhamaa (laws) from all religious (Jewish, Hindu, Buddhism, Christian, Islam, Evolutionism, and so on) and you have been practicing these laws for your long life from beginning to the end, you must to know Jesus Christ by personally face to face. If you not so, you lost your life being in Man-kind. Even you know Buddha, God, Alar, prophet Mohammad, Prophet Moses and all previous Buddhist in this earth and all universe, You must know Jesus Christ and you could able to say who he is and testify with your Life.
“I say Jesus Christ is who he is, I know him clearly and I deal with him personally be face to face.” You must be like that.
Not useful for you and me with only History, Bible, Koran, Three Pitaka,-Tree Group of Dhamma (Buddhist’s Teaching) and many words from elders. Personally experience is right, correct and Truth.
သင်ဟာ လောကမှာရှိတဲ့ ဘာသာတရားအားလုံးရဲ့သမိုင်းကြောင်းတွေ၊ တရားတွေကို အားလုံးသိ၊ အားလုံးတက်၊ တရားအားလုံးကို အာဂုံဆောင်နိုင်တဲ့သူဖြစ်တယ်။ ထိုတရား အားလုံးကို ထုံးလိုမွှေရေလိုနှောက်နေတဲ့သူဖြစ်တယ်။ လူဘ၀အစမှသည် အဆုံးတိုင်အောင် ထိုတရားဓမ္မအားလုံးကို တစ်ခုမကျန် ကျင့်သုံးနေတဲ့သူလည်းဖြစ်တယ်။ နောက်ဆုံး ရဟန္တာဖြစ်ပြီး ၊သူတော်စင်ဖြစ်ပြီး၊ လောကကိုအောင်တဲ့ လောကသားတို့က သတ်မှတ်တဲ့ ဘုရားဖြစ်ပါတယ်ဆိုစေဦးတော့ ၊ ယေရှုခရစ်ကို သင်အနေနှင့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအနေနှင့်ကို မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ဆုံ စကားပြောဖူးသူ၊ ရင်းနှီးဖူးသူဖြစ်ရမယ်။ ပညာတက်ဖြစ်တယ်။ သင်ယူစရာလေ့လာစရာတွေ ကုန်ပြီလို့ သင့်အနေနှင့်မှတ်ယူဦးတော့ ၊ လူဖြစ်လာပြီး ယေရှုခရစ်ကိုတောင်မှ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ မတွေ့လိုက်ရ၊ မသိလိုက်ရ၊ စကားမပြောလိုက်ရ၊ ယေရှုခရစ်ဆိုတဲ့သူဟာ ဘယ်လိုကောင်ပါကွာဆိုတာကို ဂဃနဏ မသိလိုက်ရ၊ တခြားသူတွေကိုတောင် မပြောပြနိုင်အောင်ဖြစ်ရတယ်ဆိုရင်၊ သင်ဟာ လောက လူသားအားလုံးက ကိုးကွယ်ထိုက်တဲ့ ဘုရားဖြစ်တဲ့သူဆိုစေဦးတော့ သင်ဟာ ယေရှုခရစ်ကို ရှုံးနှိမ့်သူဖြစ်တယ်။ သင်လူဖြစ်လာခြင်းဟာ ယေရှုခရစ်ကို သိဖို့၊ရင်းနှီးဖို့အရေးကြီးတယ်။ ထာဝရဘုရား သခင်ကိုသိတယ်။ အလာရှင်မြတ်ကိုသိတယ်။ ဗုဒ္ဓကိုသိတယ်။ ဖန်ဆင်းရှင်ကိုသိတယ်။ တမန်တော် မိုဟာမက်ကိုသိတယ်။ တမန်တော် မိုးဇက် (မောရှေ)ကိုသိတယ်။ ဒီကမ္ဘာမှာပွင့်ခဲ့ဖူးသော မရေတွက်နိုင်အောင်များသော ဗုဒ္ဓဘုရားတွေကို အကုန်သိတယ်။ စကြစဠာကြီးတစ်ခုလုံးကို အကုန်သိတယ်ဆိုစေဦးတော့ ၊ ယေရှုခရစ်ဆိုတဲ့ကောင်ဟာ ဘယ်လိုကောင်ပါကွာ ၊ ဒီကောင်ဟာ ဒီလိုလူဖြစ်တယ်ကွ ၊ တစ်လောကလုံးနှင့် တစ်ယောက်ဖြစ်စေဦးတော့ ငါအနေနှင့် ယေရှုဟာ ဒီလိုကောင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို ငါ့အသက်နှင့်တောင် အာမခံပြီး ပြောရဲတယ်ကွာ၊ ကျိန်ရဲတယ်ကွာဟု မိမိအသက်နှင့်တောင် အာမခံပြီး လူတိုင်းကို ပြောပြနိုင်တဲ့သူ၊ ပြောရဲနိုင်တဲ့သူ ဖြစ်ဖို့လိုတယ်။ ကိုယ်တွေ့ကအရေးကြီးတယ်။ သမိုင်းကြောင်းစာတွေ့၊ သမ္မာကျမ်းစာတွေ၊ ကိုရ်ရန်တရား စာတွေ၊ ဗုဒ္ဓတရားဓမ္မစာတွေ(ပိဋကတ်သုံးပုံ)နှင့် တဆင့်စကားအတွေ့အကြုံတွေသည် ဘာမျှမခိုင်လုံသလို၊ အုတ်ရောရော ကျောက်ရောရော ပုံစံနှင့်ဆို သင်ဟာ လူဖြစ်တယ် ဆိုတာတောင် အရောအနှော လူဖြစ်နေလိမ့်မယ်။ တရားဓမ္မတွေအားလုံးက အမှန်တွေဆိုတာ မသိခင်ကလည်းအမှန်၊ မတွေ့ခင်ကတည်းက အမှန်ဖြစ်နေတဲ့အရာ၊ ရှိနေတဲ့သဘောတရား အမှန်တွေဖြစ်ပါတယ်။ သင်မသိလည်းအမှန်၊ သင့်မကျင့်လည်းအမှန်ဖြစ်တယ်။ သို့သော် ယေရှုခရစ်ဆိုတာဘယ်လိုကောင်ပါကွာဆိုတာတော့ သင်အတွက်မှန်သလား၊ မမှန်သလား သဲသဲကွဲကွဲသိရမယ်။ သင့်ဘ၀မဆုံးခင် မဖြစ်မနေသိသွားရမည့် သူဖြစ်တယ်။ မတွေ့ချင်ဘူး၊ မသိချင်ဘူးဆိုလျှင်တော့ သင်ဟာ လူသားစင်စစ်မဖြစ်သေးသလို၊ မဖြစ်တဲ့သူဖြစ်တယ်။ လူသားစင်စစ်ဖြစ်ဖို့ ယေရှုကိုသိရမယ်။ သင်ဟာရဟန္တာ။ သူတော်စင်ဖြစ်ပြီး ဘုရားဖြစ်သွားတာတောင်မှ ယေရှုကိုမသိဘဲ၊ မတွေ့ဘဲ၊ ယေရှုနှင့် စကားမပြောဘူးဘဲ သေသွားခဲ့ရင်၊ သင်ဟာ လူသားဆိုတာကိုတောင် သင်ကိုယ်တိုင်မသိလိုက်ဘဲ ပြန်ထွက်သွားရတဲ့ လူမပီသတဲ့သူဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။
I call you now challenge!
Can you face to Jesus Christ?
Whatever you worship, you have this experience in your life.
If you reject to face Jesus Christ, You really lost Jesus Christ.
Although you conquest all things in this Earth, if you lost Jesus Christ, Who you are? Think your self about who you are really.
သင့်ကို ကျွန်ုပ် စိန်ခေါ်ပါတယ်။ သင် ယေရှုခရစ်ကို သိဖို့၊တွေ့ဖို့ သတ္တိရှိသလား။ သင်ဘယ်ဘုရား၊ဘယ်ဘာသာတရားကိုကိုးကွယ်သည်ဖြစ်ပါစေ၊ ယေရှုခရစ်ကို သိတဲ့သူ၊တွေ့တဲ့သူ၊ စကားပြောဖူးတဲ့သူဆိုတဲ့ အတွေ့အကြုံကို ရယူဖူးသူဖြစ်ရမယ်။ သင်တွေ့ဖို့၊သိဖို့၊စကားပြောကြည့်ဖို့ ငြင်းဆန်သောသူဖြစ်လျှင်တော့ သင်တကယ့်ကိုဘဲ ယေရှုခရစ်ကို ရှုံးနိမ့်သောသူဖြစ်တယ်။ လောကကိုအောင်တဲ့သူဖြစ်ပေမဲ့ ယေရှုခရစ်ကို ရှုံးတဲ့သင်ဟာ ဘယ်လိုလူဖြစ်မယ်ဆိုတာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို စဉ်းစားသာ ကြည့်ပေတော့။
Let start to face Jesus Christ,
ကဲ … ယေရှုခရစ်နှင့် တွေ့ဆုံဘို့ စလိုက်ကြရအောင်။
O’ Eternal Living God from Heaven,
Are you Creator for all things?
If you are really so, I want to know you and want to see you today and give me answer me today,
Yes today, not tomorrow. If you are really, come to me and tell me the Truth. Give me the truth.
I wanted to see you God and Jesus Christ today by face to face. You and me only.
If you are God and Jesus Christ is really Savior for all man-kind from Evil, come and see me today and give me witness where I am. I want to get your answer God-Creator.
This is my prayer by Jesus.
အို - ကောင်းကင်ဘုံမှ ထာဝရအရှင် ဘုရားသခင်
သင်ဟာ ခပ်သိမ်းသောအရာတွေကို ဖန်ဆင်းတဲသူဆိုတာ ဟုတ်ပါသလား။
သင်ဟာ အမှန်တကယ် အသက်ရှင်နေတယ်၊ရှိနေတယ်ဆိုတာ ဟုတ်ပါသလား။
သင်ဟာ အမှန်တကယ်ဟုတ်တယ်၊ရှိတယ်ဆိုရင် ၊ဒီနေ့မှာပင် သင့်ကို ငါတွေ့ချင်တယ်၊ သင့်ကို ငါသိချင်တယ်။ ဒီနေ့ ငါ့ကို သင်ကိုယ်တိုင်အဖြေပေးပါ။
ဒီနေ့ဟုတ်တယ်။ နောက်နေ့ မနက်ဖြန်ဆိုတာ မစောင့်ဘူး၊ မလိုချင်ဘူး။ သင်ဟာ အမှန်တကယ်၊ ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရား၊ ထာဝရ အသက်ရှင်တဲ့ ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဆိုရင် ဒီနေ့ ငါကို အဖြေပေးပါ။ ငါရှိတဲ့နေရာကို သင်လာခဲပါ။ ဒီနေ့လာပါ။ ဘုရားသခင်ကိုငါတွေ့ချင်တယ်၊ လူသားတွေရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဆိုတဲ့ယေရှုခရစ်ဆိုတဲ့သူကို သိချင်တယ်။ တွေ့ချင်တယ်။ သင်တို့နှင့်ငါ မျက်နှာချင်းဆိုင် တစ်ယောက်ချင်းကို တွေ့ချင်တယ်၊ စကားပြောချင်တယ်။ ဘုရားသခင်ဆိုသူ ၊ ယေရှုခရစ်ဆိုတဲ့ ကယ်တင်ရှင်ဆိုသူ - သင်ကိုယ်တိုင်ပဲ ယနေ့ငါ့ဆီကိုအရောက်လာပြီး သင့်နှုတ်က သက်သေပေးပါ။ ထာဝရဘုရားသခင် သင်ပေးတဲ့ သက်သေကိုပဲ ငါလိုချင်တယ်။ ယေရှုအားဖြင့် ဆုတောင်းပါတယ်။ အာမင်။
Web Site: WWW.AIRMANDALAY.COM